Shintsha ulimi lwe-proofreader ku-PowerPoint | Izindaba zeWindows
Shintsha ulimi lwe-proofreader ku-PowerPoint
Shintsha ulimi lwe-proofreader ku-PowerPoint Kwesinye isikhathi kungahle kudingeke uma siphoqwa ukusebenzisa ulimi okungelona olwethu olujwayelekile, ikakhulukazi uma sisebenza njalo nezinye izilimi ezifana nesiNgisi. Uma singalwazi kahle ulimi, singenza noma yimaphi amaphutha esipelingi.
Ukuyigwema futhi ibukeke kabi ebusweni beklayenti noma uma kungumsebenzi wekilasi, akukaze kube buhlungu, sebenzisa isihloli sesipelingi esitholakala ku-PowerPoint. Ngendlela yomdabu futhi engachazeki, iningi labasebenzisi abasebenzisa isiNgisi njengolimi lomhloli wokuhlola.
Ngokuba nesiNgisi njengolimi, wonke amagama esiwabhalayo, izodwetshelwa ngokubomvu uma sibhala ngolunye ulimi ngaphandle kwesiNgisi, simema ukuthi sibuyekeze ngoba asikho kusichazamazwi. Ukushintsha ulimi lomqondisi ku-PowerPoint kufanele senze izinyathelo engizichaza ngezansi:
Lapho sesivule idokhumenti esifuna ukuyibuyekeza, siya enkethweni Buyekeza iribhoni.
Okulandelayo, chofoza ku Ulimi - Setha ulimi lokulungisa.
Ekugcineni, kufanele sithole ulimi esifuna ukulusebenzisa ukubheka ukuthi ngabe silibhale kahle yini igama kwisethulo.
Ukugwema ukuvakashela wonke amaslayidi ayingxenye yesethulo, kubhoni lokubuyekeza, kufanele chofoza inketho yokuqala: Isipelingi. Le nketho izohlaziya wonke umbhalo ofakiwe futhi izosikhombisa wonke amagama angatholakali esichazamazwini.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zeWindows » General » Imihlahlandlela namathiphu » Shintsha ulimi lwe-proofreader ku-PowerPoint
Ungalanda kanjani iHalcyon 6 mahhala naphakade